Duqeyn ka dhacday gobolka Bakool | KEYDMEDIA ONLINE
Xubno Sare oo katirsanaa Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duqeynta diyaaradeed.
XUDUR, Soomaaliya - Diyaarado dagaal oo loo maleynayo inay yihiin kuwa militeriga Mareykanka ayaa duqeyn cirka ah xalay ka fuliyay duleedka degmada Xudur, ee xarunta gobolka Bakool.
Weerarka wuxuu ka dhacay Tuuladda Maamadow, oo qiyaastii 40-KM dhanka bari uga beegan Xudur, waxaana la sheegay in diyaaradaha ay dhowr gantaal ku dhufteen goob ay ku sugnaayeen dagaalyahanada Al-Shabaab.
Saraakiisha Militeriga Soomaaliya ee ku sugan gobolka ayaa u sheegay Keymedia Online in hogaamiyeyaal sare oo kamid ahaa Al-Shabaab in duqeynta lagu dilay, kuwaasoo la beegsaday xili habeen ah oo ay jiifeen.
Wali Taliska Militeriga Mareykanka ee Afrika [AFRICOM] wax war ah kama soo saarin howlgalka inay igu fuliyeen iyo inkale, laakiin wararka ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha ay ahaayeen drones, kuwaasoo ay adeegsadaan Ciidanka US.
0 Comments Topics: africom al-shabaab drones soomaaliya